कति छ सन्दिपसहित (पिएसएल)को ड्राफ्टमा रहेका नेपाली खेलाडीको मूल्य??
काठमाडौ :पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) २०२१ को ड्राफ्टमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने सहित ११ नेपाली खेलाडी परेका छन् ।
ड्राफ्टमा खेलाडीलाई प्लाटिनम, डायमन्ड, गोल्ड र सिल्भर श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । नेपालबाट प्लाटिनम क्याटेगोरीमा सन्दीप लामिछाने र सिल्भर क्याटेगोरीमा अन्य १० खेलाडी छन् । विकेटकिपर विनोद भण्डारीले गोल्ड क्याटेगोरीमा नाम दर्ता गराएका छन् ।
सिल्भर विदेशी कोटामा सुशन भारी, सोमपाल कामी, साहब आलम, शरद भेषावकर, सुवास खकुरेल, ललित नारायण राजवंशी, पवन सरार्फ, वसन्त रेग्मी र विक्रम सोब छन् । पिएसएलले औपचारिक रुपमा भने ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।
हरेक टोलीले समान ३-३ प्लाटिनम, डायमन्ड, र गोल्ड क्याटेगोरीका खेलाडी अनुबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच सिल्भर, इमर्जिङ र पूरक दुई दुई खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउछन् ।
१६ कुल खेलाडी भएमा ११ पाकिस्तानी खेलाडी हुनुपर्ने हुन्छ । १८ खेलाडी भएमा १२ पाकिस्तानी खेलाडी अनिवार्य अनुबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लेइङ ११ मा एउटा टोलीले बढिमा ४ मात्र विदेशी खेलाडी खेलाउने पाउने गर्दछन् । कोरोना कारण यस वर्ष खेलाडी सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना छ ।
सन्दीप रहेको प्लाटिनम क्याटगेरी अनुबन्ध हुने खेलाडीले १ लाख ३० हजार देखि १ लाख ७० हजार डलर सम्म पारिश्रमिक पाउनेछन् । सिल्भरमा रहेकाले १५ हजार देखि २५ हजार डलर सम्म रहनेछ । गत वर्ष प्लाटिनम क्याटेगोरीमा सन्दीप लामिछाने विकेका थिएनन् ।
गत वर्ष सिल्भर विदेशी कोटामा उप कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, कुशल मल्ल, पारस खड्का, अभिनाष बोहोरा, पवन सरार्फ, सुवास खकुरेल र आसिफ शेखलाई पनि कुनै टोलीले अुनबन्ध गरेका थिएनन् ।ड्राफ्ट १२ डिसेम्बरमा हुनेछ । पिएसएल २०२२ आगमी २७ जनवरी देखि फेब्रुअरी २७ सम्म पाकिस्तानमा हुनेछ ।
२०७८ मंसिर २१, मंगलवार १८:३१ 1 Minute 220 Views
कप्तान सन्दीपलाई अर्को ठूलो सफलता
बधाई ! दुधे बालक च्या’पेर मैदानमा हो’मिएकी अ’निता चौधरी …
सन्दीपसहित आधा दर्जन बढी नेपाली खेलाडीको नाम पीएसएलको ड्राफ्टमा